“မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်”
“မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်”
Posted by pooch on May 26, 2011 in Copy/Paste | 36 comments
ပထမဆုံး မေးခွန်းလေးတွေကို အရင်အကုန် ဖတ်ပြီး ကိုယ်ပထမဆုံး လုပ်ချင်တာက စပြီး နံပါတ်စဉ် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ ဆိုပြီးတော့ အစဉ်လိုက် စီလိုက်ပါ။
ဖြေတဲ့ အဖြေပေါ် မူတည်ပြီး ကိုယ်ဘယ်လိုလူစားလည်း ဆိုတာ အဖြေထုတ်ပေးသွားမှာပါ။ အပျင်းပြေပေါ့။ ကဲစပြီနော်
တနေ့အိမ်မှာ မိသားစုတွေ အားလုံး အပြင်သွားလို့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်တူလေး ၂ ( နှစ်သားအရွယ်) နှစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကလေးကလည်း တအားအော်ငိုနေတယ် ၊၊ အဲ့ဒီအချိန် မှာပဲ တပြိုင်နက် ဆိုသလို တယ်လီဖုန်း ကလဲ မြည်နေတယ်။ အိမ်ရှေ့ မှာ လည်း ဧည့်သည်တစ်ယောက်က လူခေါ်ဘဲလ် ကို တီးနေတယ်။ နောက်ဖေးမှာ လည်း ရေတင်တာ ရေပြည့်လို့ လျှံကျနေတော့ ရေ ခလုတ်ကလည်း ပိတ်ရဦးမယ်။ ကိုယ်ကလည်း အလွန်အင်မတန် မှကို ဆီးသွားချင်နေတယ်။
ကဲ ဘယ်ဟာကို အရင် လုပ်မလဲ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို အစဉ်လိုက် နံပါတ်စဉ်တပ်ပြီး ချရေးလိုက်ပါ။ Psycho မေးခွန်းလေးတွေပါ။ မင်းဟာ ဘယ်လိုလူစားလဲ ဆိုတာကို ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ဖြေတဲ့ လူ ၅ ယောက်ပြည့်ရင် အဖြေပြောပြပါ့မယ်။
၁။ ရေခလုတ်ကို အရင်ဆုံး မီးပိတ်မယ်။
၂။ ပြီးရင် ဆီးသွားမယ်။
၃။ ကလေးကို ခေါ်မယ်။
၄။ ဧည့်သည်ကို တံခါးဖွင့်ပေးမယ်။
ပြီးမှ နောက်ဖေးကို ရေပိတ်ရင်း
ငါးယောက်ပြည့်သွားပြီ pooch အဖြေပေးတော့
ဒီလိုဖြေလို့ရမရတော့ မသိဘူး ဖြေကြည့်မယ်
သားရေ နယ် ၊ စပါးလှမ်း၊ ဟတ်ချိုး၊ အဟမ်း၊ ဘွတ်……………။
၅ ရှူရှူးထွက်ကျပြီ :p :p
၅-ဧည့်သည်ထိုင်ခိုင်း၊ကလေးပေးပြီး တခုခုယူမယ်ဆိုပြီး အိမ်သာသွားမယ်။
၁။ ဧည့်သည်ကို တံခါးဖွင့်ပေးမယ်။
၂။ ရေခလုတ်ပိတ်မယ် ။
၃။ ဆီးသွားမယ် ။
၅။ ဖုန်းပြောမယ် ။
ပထမဆုံး ကလေးချည်မယ်ဗျာပြီးတော. တံခါးသွားဖွင်.ပေးမယ် ပြီးတော.မှထုံးကိုင် အဲ ဖုန်းကိုင်မယ် အဲဟန်းဖုန်းဆိုရင်တော.ဖုန်းလေးကိုင်ပြီးရေသွားပိတ်မယ် ဆီးကလဲသွားချင်နေတော.ဖုန်းကိုခဏလေးဗျာလို.ပြောပြိးရေအိမ်တက်မှာပေါ.
ူလူဆိုး အဖြေ လဲမပေးဘူး
တယ်လီဖုံးကိုမ..ကလေးဆီထိုးပေးလိုက်ပြီး… ဧည့်သည်ကိုအခန်းထဲသွင်း.. ရေခလုပ်ပိတ်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းလိုက်မယ်..။
ကလေးကောက်ချီပြီး ဖုန်းကိုင်(ခဏစောင့်ဖို့ပြောပြီး) တံခါးပြေးဖွင့်(အလှုခံဆို ဆောင့်ပိတ်လိုက်) အသိဆိုရင်လာထိုင်လုပ်ပြီး ရေမော်တာခလုပ်ပိတ်(ရေခလုပ်က အိမ်ရှေ့မှာများပါတယ်) ပြီး ဆီးသွားလိုက်ပေါ.။
2. ဧည့်သည်ကို တံခါးသွားဖွင့်ပေးလိုက်မယ်… ပြီးတော့ကလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်ပြီး …
3. အိမ်သာထဲ တန်းပြေးမယ်… ။
4.ပြီးမှ ရေလျှံနေတာပိတ်မယ်… ။
5.ဖုန်းကတော့ အရေးကြီးလျှင် သူနောက်တခါ ပြန်ခေါ်မှာပဲလေ … ။ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းပေဂျာမှာ နံပါတ်ပေါ်လျှင်ကိုယ့်ဘက်က ပြန်ဆက်ပေးလိုက်ပေါ့ …
အားလုံးမှန်ပါတယ် မှားတာက ဖြေတဲ.သူတွေ
psycho မေးခွန်းဆို … အမှားမှန်မှ မရှိပဲ… ။
စာရေးသူက …အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြန်ဆွေးနွေးသင့်တယ်…
မေးခွန်း တခုစီက ဘာကို ဆိုလိုသလဲ သိပါ၏
ဟဲဟဲ.. စာရေးသူ ပြောပါစေနော်..
ခလေးချီ၊ အိမ်တံခါးဖွင့်ပေးပြီး ဧည့်သည်ကိုဖုန်းခဏဖြေထားခိုင်း(မအားသေးတဲ့အကြောင်း)၊ ရေခလုတ်ပိတ်ရင်း ကျင်ငယ်စွန် ့
1.ကလေးချီ 2.ရေပိတ် 3.တံခါးဖွင့် 4.ဖုန်းကိုင် 5.ဆီးသွား
ကဲ အဖြေတွေ စုံနေပြီ၊ အဖြေမှန်တော့ ပြောသင့်ပြီထင်တယ်…
အိမ်ရှေ့ကဧည့်သည်ကို “အလုပ်များနေလို့ခဏစောင့်ပါ” လို့ပြောပြီး
ပြီးရင်ဖုံးကိုင်ပြီး “ဧည့်သည်ရောက်နေလို့ပြန်ဆက်ပေးပါမယ်”ဆိုပြီး ဧည့်သည်ကိုတံခါး သွားဖွင့်ပေးမယ်။
ဧည့်သည် ပြန်သွားရင် ဖုံးပြန်ဆက်ပေးမယ်။
ထန်းပင်ပေါ်ကရှဉ့်ကိုခြောက် ၊ ထမင်းခြောက်ဗန်းမွှေ ၊ သားရေနယ်နေပူတိုး ၊ ကျောင်းတိုင်ကိုဒါးမောက်နှင့်မထိုးနှင့် ၊ ဟတ်ချိုး ၊ အဟမ်း ၊ ဘွတ်။
အိမ်ရှေ့ကဧည့်သည်ကို “အလုပ်များနေလို့ခဏစောင့်ပါ” လိုအော်ပြောပြီး
pooch ၅ခုပြည့်ရင်ပြောမယ်ဆို၊ ၂၆ခုရှိသွားပြီ ပြောတော့လေ။
၁။ ကလေးဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသား နူးညံ့မှု ကြင်နာသနားတတ်မှု ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။
၂။ဖုန်းမြည်တာကတော့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ ကိုအလေးထားမှုကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
၃။ဧည့်သည်ကတော့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း နယ်ပယ်က လူမှုဆက်ဆံရေး ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
၄။ရေကတော့ ငွေကြေးအပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အလေးထားမှုပါ။
၅။ဆီးသွားတာကတော့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ sex ပါ။
အကောင်းဆုံးအဖြေဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လူအမျိုးအစားပဲ ကွဲသွားတာပါ။
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ဆိုတော့ ရွေးချယ်မှုတွေ လည်းမတူနိုင်ပါဘူး။
ရေခလုတ်ကို အရင်ပိတ်တဲ့ သူက သူဘဝရဲ့ ပထမဦးစားပေးက ငွေကြေးဖြစ်ပြီး ရှာလို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံကိုလည်း တန်ဖိုးထားပြီး ကောင်းကောင်းစီမံ ခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
တချို့ တွေကလည်း သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းက ဘဝမှာ ပထမဦးစားပေး အရေးကြီးဆုံးပေါ့။
သူငယ်ချင်းနဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ရင် တောင် မနေတတ်မထိုင်တတ်တဲ့ အထိ ခံစားတတ်ကြတယ်။
တချို့ တွေကတော့ လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လည်းသဟဇာတ ဖြစ်သလို စီးပွားရေးမှာလည်း အောင်မြင်တတ် ကြပါတယ်။
ကလေးအရင်ချီတဲ့ သူများကတော့ ဘဝမှာ ကိုယ်ချင်းစာတရား လက်ကိုင်ထားပြီး အရာရာကို မျှမျှတတ တွေးတတ်ပါတယ်။ ကြင်နာတတ်သလို နှလုံးသားလည်း နူးညံ့ပြီး ခွင့်လွှတ်တတ်ကြပါတယ်။
ဆီးအရင်သွားသူများကတော့ အိမ်ထောင်စောစော ကျရင်ကျ မကျရင်လည်း sex နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မထိန်းချုပ်နိုင် တတ်ပါဘူး။ ချစ်မှုရေးရာ မှာလည်း ကိုယ့်စိတ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင် တတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အဲ.. ဒါပေမဲ့ ဆီးကိုနောက်ဆုံး မှသွားပြန်ရင်တော့ အပျိုကြီး ၊ လူပျိုကြီး ဖြစ် ရင်ဖြစ် မဖြစ်ရင်လည်း အိမ်ထောင်ပြု နောက်ကျတတ်ပါတယ်။ အစောဆုံး ၃ဝ ဝန်းကျင်လောက်မှ အိမ်ထောင်ပြုဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးကိုနောက်ဆုံးမှ ချီရင် အခုချိန်ထိ အဲဒီလူက လူလွတ် ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ကျပြီးသားဆိုရင်လည်း ကလေးမရှိသေးပါ ဘူး။
ကဲ ရွာသူရွာသားများ ဒီအဖြေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်ဟာ ဘဝမှာ ဘာကိုတန်ဖိုးအထားဆုံး လည်းဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
မှန်မမှန်လည်းပြောပြ ကြအုန်းနော်။ ဖြေပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Mandalay မှာ ရွာသားများတွေ့ ဆုံပွဲ လုပ်ဖြစ်တဲ့ တနေ့ကျရင် အားလုံး ကို ဒကာခံပြီးကျွေးပါ့မယ်။
အောက်ဆုံးမှာ ပြောထားတာကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲဗျာ
မှန်ပါတယ်။ ဒကာခံပြီးကျွေးမယ့်လူအတွက် နေ့တွေ ရက်တွေ အများကြီးမစောင့်ရတော့ပါဘူး။ ၅.၆.၂၀၁၁ နေ့ဆိုရင် ရပါပြီ။
ကောင်းလိုက်တဲ့အဖြေလေးပဲ ဒကာခံမယ့် ဒကာကြီး pooch ရေ၊ ဒီအဖြေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ဓါတ်ကို ကိုအဖြေထုတ်လို့ရတာပေါ့၊ pooch ဆိုရင်ကောဘယ်လိုလုပ်မှာလည်း ၊ သူများကိုမေးပြီး pooch လည်းဖြေဦးလေ။
၁။ ဧည့်သည်ကို တံခါးအရင်ဖွင့်ပေးမယ်။
Mandalay မှာသာ တွေ့ဆုံပွဲကို လုပ်ဖြစ်အောင်သာလုပ်ကြပါ သေချာပေါက်ကျွေးမှာပါ။ ကိုယ်က Mandalay မှာနေတော့ Yangon ကိုမလာနိုင်လို့ပါ။
ကျနော့်အဖြေကိုကြည့်ပြီး တော်တော်ခွကျတဲ့လူလို့ပဲ ထင်သွားတယ်ထင်တယ်။ အဖြေကိုကြည့်ပြီး pooch နဲ့တော်တော်ကွာတာပဲ။
pooch ရေ တကယ်ပြောတာလား…. နောက်ရဝူးနော်….
ကလေးကို ချီပြီး ရေပိတ်မယ် … ပြီးရင် ဖုန်းကိုင်ပြီး ပြီးမှ ပြန်ဆက်လို့မြန်မြန်ပြောမယ် … ပြီးရင် တံခါးဖွင့်မယ် ပြီးရင် ရှုးပေါက်မယ်
ဒါမျိုးလေးတွေ သဘောကျတယ် ။။။ စိတ်ဝင်စားတယ် ရှိသေးရင် ထပ်တင်ပေးပါဦးနော်